Maxkamada ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya oo toogasho ku xukuntay ninkii dilay taliyihii nabadsugida gobolka Shabeelada Dhexe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaxkamada ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya oo toogasho ku xukuntay ninkii dilay taliyihii nabadsugida gobolka Shabeelada Dhexe
June 23, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Yuusuf Xasan oo ah ninka lagu xukumay dilka toogashada.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamada darajada kowaad ee ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah u fadhiisatay dacwada loo heystay eedaysanayaal uu ku jiro ninkii dilay taliyihii nabadsugida gobolka Shabeelada Dhexe.
Maxkamada ayaa dil toogasho ah ku xukuntay Yuusuf Xasan (Yuusuf Madoobe) oo lagu helay inuu gacantiisa ku toogtay taliyihii nabadsugida gobolka Shabeelada Dhexe.
Taliyihii nabadsugida gobolka Shabeelada Dhexe, Cabdiweli Ibraahim Maxamed ayaa Talaadadii waxaa toogasho ku dilay mid kamid ah wardiyaashiisii gudaha magaalada Jowhar.
Maleeshiyada al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas, afhayeenka howlgalada al-Shabaab Cabdicasiis Abu Muscab ayaa wakaalada wararka Reuters u sheegay in ay iyagu ka dambeeyeen dilka taliyaha.
July 26, 2016 Al-Shabaab oo weerar isbiimayn ah ku dishay ugu yaraan 15 qof xarunta Amisom ee Muqdisho
Al-Shabaab attacks AMISOM base in Bulomareer town
Islamist insurgents battled for hours on Sunday with African Union troops after exploding a car bomb outside their base, Somali police, military and the militants said. Al Shabaab militants attacked the African Union (AU) peacekeepers’ [...]